Xasiloonida faraska | Fardaha Noti
Joogtayntu waxay faraska ku haysaa kiiskan: deggan, xasilloon ama sanduuq, waana goobta aad ficil ahaan maalintii oo dhan ku qaadato. Joogsiga farasku wuxuu beddelayaa qaab-dhismeedkiisa bulsheedl, maqnaanshaha xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee dhalisa caajis, tani waxay horseedi kartaa faraska si loo abuuro xaalado dhibaato leh oo go'doomin iyo isku buuqsan.
Fardo loogu talagalay in la go'doomiyo waa in laga hor istaago inay gebi ahaanba faraxsan yihiin. Go'doominta ayaa ka reebaysa ilaalinta laga helo lo'da oo markaa waxay u nugul yihiin inay noqdaan kuwo walwalsan. Sidoo kale daruuri maahan in farasku la joogo kuwa caynkiisa ah, waxaa raaci kara xayawaano kale si aan kaligood loo dareemin.
Dhinaca kale, fardaha xeel dheer, xitaa haddii ay wehel ku leeyihiin sanduuqa, kuwa kale oo lamid ah, haddii aysan iswaafaqin, waxay abuuri karaan walaac. Dabeecadahaani waxay yeelan karaan cawaaqib sida yaree waxqabadka iyo, sidaa darteed, ka qiimaha faraska maxaa yeelay waxay si xun u saameyneysaa caafimaadkaaga.
Jirka iyo addimada waxaa loogu talagalay dhaqdhaqaaq joogto ah. Sidaa darteed, tooreyntu waa mid lid ku ah dabeecaddeeda, sidaa darteed waxaa muhiim u ah caafimaadkeeda inay u oggolaato ugu yaraan dhowr saacadood maalintii inay ka baxdo xasilloonida oo ay si xor ah ugu dhaqaaqdo, hoolka dusha sare ama kan lagu raaco, iyo wixii ka sarreeya oo dhan, si loo hubiyo inay ugu fiicnaato - ahaanshaha intaad ku jirtid dhismaha maadaama ay tahay meesha aad waqtigaaga intiisa badan ku qaadato wax walbana waa inay ku ahaadaan xaalad wanaagsan.
Way ku habboon tahay sanduuqyadu waa kuwo raaxo leh oo si sax ah u jahaysan, iyadoo laga fikirayo oo keliya kuleylka sare ee xagaaga, laakiin sidoo kale kuleylka hoose ee xilliga qaboobaha. Cabbiraaduhu waa muhiim oo way isbadali karaan, maxaa yeelay waxay ku xirnaan doonaan cabirka faraska. Dabaqa iyo derbiyadu waa inay ka samaysan yihiin waxyaabo la dhaqi karo si loogu oggolaado nadaafadda iyo jeermiska. Waxaa lagugula talinayaa in kuwa cabba iyo kuwa quudiyaaba xagal yeeshaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Xeryaha » Faras mindiyo
Noocyada fikradaha ee fardaha (I)
Sida loo qabto faras